Ma u baahan tahay meel aad ku noolaato
Ku soo dhawow xarunta hoy la'aanta
Xarunta hoy la’aanta waxay ka kooban tahay meel mudo dadka waawayn ee bilaa guriga ahi deganaanayaan iyo kiliiniga-neerasta oo ku yaala Sundholmsvej 16 iyo 20 Amager.
Haddii aad tahay bilaa guri oo aad qabto dhibaato khamri ama / iyo xashiishad, dhibaato dhimir iwm, laga yaabaa in xarunta hoy la’aantu kuu noqoto meel aad sii marto.
Markaad degen tahay meesha guryo la’aanta waxad heli karaysaa talo iyo taageero sidii aad u heli lahayd guri ama meel aad joogto u deganaanayso. Waa suurto gal in aad hesho turjumaan, haddii af daanishku ahayn afkaaga hooyo.
Waad soo tilifoonin kartaa ama waad soo mari kartaa, haddii aad rabto warbixin faahfaahsan oo ku saabsan sidaad qol uga heli lahayd xaruntan hoy la’aanta. Haddii ayna kuu suurtogal ahayn in aad soo tilifooniso ama soo marto, waxad la xidhiidhi kartaa la taliyahaaga, dhaqtarkaaga iwm.
Marka ugu horaysa ee aad timaad xarunta hoy la’aanta waxa kula hadlaya qof shaqaalaha ka mida
Oo kuu sheegaya in aad tahay guruubka loogu talo galay meesha. Haddii aad tahay guruubka loogu talagalay qol ayaa lagusiin markuu firaaqoobo.
Haddii aan anagu hayn qol banaan, waxan ku dadaalaynaa sidii aan kuu caawin lahayn ee laguu dajin lahaa xarun hoy la’aan oo meel kale ah.
Waxad inkale ka sii akhrisan kartaa xarunta hoy la’aanta “Hadaan wax iskaga kiin sheegno” qoraalka boga hore.
“Waxa kale ee lagu kaalmeeyo dadka bilaa hoyga ah” halkan waxad ka helaysaa warbixin ka hadlaysa meelaha la degi karo, kafateeri iwm oo ah magaalo madaxda eeriyadeeda.
Kiliiniga-neeraska waad iman kartaa markaad tahay hoylaawe adiga oon balan qabsan ayaad la hadli kartaa neerastayada waayo aragtinimada leh si ay kuula xidhiidhiso kuwo ku sii daaweeya. Haddii aad rabto in aad wax dheerada ka ogaato, sida loo isticmaalo kiliiniga, waxad ka helaysaa warbixin dheerada ‘ kiliiniga’ qoraalka boga hore.
Hadaan wax iskaga kiin sheegno
Xarunta dadka aan hoy lahayn waxay ka kooban tahay laba qaybood oo kala ah, meesha dadka bilaa guriga ah iyo kiliiniga.
Links soo socda ma laga heli karaa Soomaalida
Hjemløsetilbud i København
Find her en oversigt over hjemløsetilbud i København
Du kan her læse om emner, der handler om din sundhed.
tlf.: 33 17 67 14 / 29 39 46 68
Foreninger og samarbejdspartnere